ကျရှုံးမှုကို အောင်မြင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ လူသား ၁၁ ယောက် – Gentleman Magazine
ကျရှုံးမှုကို အောင်မြင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ လူသား ၁၁ ယောက်
အောင်မြင်မှုဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မရပါဘူး။ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ သူတွေထဲမှာ မရုန်းကန်ဖူးသူ မရှိပါဘူး။ ကံကြမ္မာဆိုတာ အချိန်တိုင်း မျက်နှာသာ မပေးပါဘူး။ အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရရင် ပြန်ထပြီး ရှေ့ဆက်ကြိုးစားမှ အောင်မြင်မှာပါ။ ဒီမှာ ငယ်ငယ်က အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ပေမယ့် ဆက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လူ ၁၁ ယောက်ကို တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
၁. Walt Disney
မစ်ကီမောက်လေးရဲ့ ဖခင် Walt Disney ဟာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ အစမှာ အပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကို စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ကမ္ဘာကျော် Donald Duck နဲ့ Guffy တို့ကို ဆက်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးပြခဲ့ပါတယ်။
၂. Steve Jobs
Apple ရဲ့ ဖခင် Steve Jobs ဟာ သူ့မိဘတွေမှာ သူ့ကိုမွေးထားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ပေးပစ်ခံခဲ့ရသူပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ သူပါဝင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီက သူ့ကို ပြန်အလုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာရဲ့ ဖခင်တစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားနေပါပြီ။
၃. Steven Spielberg
ET, Jurassic Park တို့ကို ရိုက်ကူးပြခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ သူဟာ ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုက အရည်အချင်းမမီဘူးဆိုပြီး လက်မခံခဲ့တဲ့သူပါ။ အခု အဲဒိကျောင်းမှာ သူ့နာမည်နဲ့ ကျောင်းဆောင်တစ်ခု ရှိနေပါပြီ။
၄. Henry Ford
၂၀ ရာစု စက်မှုတော်လှန်ခေတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ford ဟာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခါပျက်၊ ဘဏ်ပြိုလဲမှုကို ငါးကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက သူ့ကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ကျမသွားစေခဲ့ပါဘူး။
၅. Richard Branson
ကလေးဘဝမှာ စိတ်မနှံလို့ ကျောင်းက လက်မခံခဲ့တဲ့ Richard Branson ဟာ အခုအခါမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကို အကွက်မြင်တတ်တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ ၁၂ ယောက်မြောက် အချမ်းသာဆုံး သူဋ္ဌေးဘဝကို ပိုက်ဆိုင်ထားပါတယ်။
၆. Abraham Lincoln
အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ၁၆ ယောက်မြောက် သမ္မတကြီး Lincoln ဟာ စစ်ထဲမှာ ရာထူးချခံခဲ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေး ပျက်စီးခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၈ ကြိမ်ဆက်တိုက် ရှုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။
၇. Michael Jordan
ကမ္ဘာ့ ဘီလီယံနာ ဘက်စကက်ဘော ကစားသမား No. 23 Michael Jordan ကို လူတိုင်း သိကြမှာပါ။ သူငယ်ငယ်က သူ့ကို ကျောင်းဘတ်စကက်ဘောအသင်းက မရွေးခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ လူတိုင်း မသိကြပါဘူး။
၈. Albert Einstein
၂၀ ရာစုရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် Einstein ဟာ အသက် ၄ နှစ်မှ စကားစပြောတာပါ။ ကျောင်းအထုတ်လဲ ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေက သူ့ကို Physics နိုဘယ်ဆုရရှိဖို့ကနေ မတားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၉. J.K Rowling
Harry Potter ရဲ့ ဖန်တီးရှင် စာရေးဆရာမကြီးဟာ အစက ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေလို့ အစိုးရထောက်ပံ့ငွေနဲ့ နေနေရတာပါ။ Harry Potter ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကို စာအုပ်တိုက် ၁၂ ခုက ပယ်ချဘူးပါတယ် တဲ့။
၁၀. Amitabh Bachchan
ဒီ Bollywood Star ကြီး အမီတာဘချမ်းကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယ ရေဒီယိုက သူ့အသံကို ငြင်းဖူးပြီး ပထမဆုံး ရုပ်ရှင် ၁၂ ကားလုံး ရှုံးဖူးတယ်ဆိုတာ သိသူနည်းပါတယ်။
၁၁. Oprah Winfrey
ဘဝပေးကံ ဆိုးတယ် ထင်သူများအတွက် Oprah Winfrey ဟာ အသက် ၉ နှစ်မှာ မုဒိမ်းအကျင့်ခံရပြီး ၁၅ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူက ကမ္ဘာ့ဩဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးထဲ ပါဝင်လာပြီး ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လူမည်း ဘီလျံနာ ဖြစ်ခဲ့တာကို မေ့မထားပါနဲ့။
ကရြှုံးမှုကို အောငျမွငျမှုအဖွဈ ပွောငျးလဲပဈနိုငျခဲ့တဲ့ လူသား ၁၁ ယောကျ
အောငျမွငျမှုဆိုတာ လှယျလှယျကူကူနဲ့ မရပါဘူး။ ထိပျဆုံးရောကျနတေဲ့ သူတှထေဲမှာ မရုနျးကနျဖူးသူ မရှိပါဘူး။ ကံကွမ်မာဆိုတာ အခြိနျတိုငျး မကျြနှာသာ မပေးပါဘူး။ အခကျအခဲတှနေဲ့ တှကွေုံ့ရရငျ ပွနျထပွီး ရှဆေ့ကျကွိုးစားမှ အောငျမွငျမှာပါ။ ဒီမှာ ငယျငယျက အခကျအခဲတှေ ကွုံခဲ့ပမေယျ့ ဆကျကွိုးစားခဲ့တဲ့ လူ ၁၁ ယောကျကို တှမွေ့ငျနိုငျမှာပါ။
မဈကီမောကျလေးရဲ့ ဖခငျ Walt Disney ဟာ တီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျးမရှိဘူးလို့ အစမှာ အပွောခံခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒါကို စိတျဓာတျမကပြဲ ကမ်ဘာကြျော Donald Duck နဲ့ Guffy တို့ကို ဆကျပွီး တီထှငျဖနျတီးပွခဲ့ပါတယျ။
Apple ရဲ့ ဖခငျ Steve Jobs ဟာ သူ့မိဘတှမှော သူ့ကိုမှေးထားဖို့ ပိုကျဆံမရှိလို့ ပေးပဈခံခဲ့ရသူပါ။ နောကျပိုငျးမှာ သူပါဝငျတညျထောငျခဲ့တဲ့ ကုမ်ပဏီက သူ့ကို ပွနျအလုပျထုတျခဲ့ပါတယျ။ ခုခြိနျမှာတော့ ဒီဂဈြတယျကမ်ဘာရဲ့ ဖခငျတဈဦးအဖွဈ ထငျရှားနပေါပွီ။
ET, Jurassic Park တို့ကို ရိုကျကူးပွခဲ့တဲ့ ဒါရိုကျတာကွီးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို လူတိုငျးသိကွပါတယျ။ သူဟာ ငယျငယျက ရုပျရှငျသငျတနျးကြောငျးတဈခုက အရညျအခငျြးမမီဘူးဆိုပွီး လကျမခံခဲ့တဲ့သူပါ။ အခု အဲဒိကြောငျးမှာ သူ့နာမညျနဲ့ ကြောငျးဆောငျတဈခု ရှိနပေါပွီ။
၂၀ ရာစု စကျမှုတျောလှနျခတျေရဲ့ ခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Ford ဟာ ကုမ်ပဏီနှဈခါပကျြ၊ ဘဏျပွိုလဲမှုကို ငါးကွိမျ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါတှကေ သူ့ကို ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကားကုမ်ပဏီတဈခုတညျထောငျဖို့ စိတျဓာတျကမြသှားစခေဲ့ပါဘူး။
ကလေးဘဝမှာ စိတျမနှံလို့ ကြောငျးက လကျမခံခဲ့တဲ့ Richard Branson ဟာ အခုအခါမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးပေါငျးမြားစှာကို အကှကျမွငျတတျတဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံရဲ့ ၁၂ ယောကျမွောကျ အခမျြးသာဆုံး သူဋ်ဌေးဘဝကို ပိုကျဆိုငျထားပါတယျ။
အမရေိကနျရဲ့ အကွီးမွတျဆုံး ခေါငျးဆောငျတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ ၁၆ ယောကျမွောကျ သမ်မတကွီး Lincoln ဟာ စဈထဲမှာ ရာထူးခခြံခဲ့ရပါတယျ။ စီးပှားရေး ပကျြစီးခဲ့ပွီး ရှေးကောကျပှဲ ၈ ကွိမျဆကျတိုကျ ရှုံးခဲ့ဖူးပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ ဘီလီယံနာ ဘကျစကကျဘော ကစားသမား No. 23 Michael Jordan ကို လူတိုငျး သိကွမှာပါ။ သူငယျငယျက သူ့ကို ကြောငျးဘတျစကကျဘောအသငျးက မရှေးခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ လူတိုငျး မသိကွပါဘူး။
၂၀ ရာစုရဲ့ အကွီးမွတျဆုံး သိပ်ပံပညာရှငျ Einstein ဟာ အသကျ ၄ နှဈမှ စကားစပွောတာပါ။ ကြောငျးအထုတျလဲ ခံခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒါတှကေ သူ့ကို Physics နိုဘယျဆုရရှိဖို့ကနေ မတားနိုငျခဲ့ပါဘူး။
Harry Potter ရဲ့ ဖနျတီးရှငျ စာရေးဆရာမကွီးဟာ အစက ကလေးတဈယောကျနဲ့ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈနလေို့ အစိုးရထောကျပံ့ငှနေဲ့ နနေရေတာပါ။ Harry Potter ဇာတျလမျးအကဉျြးခြုပျကို စာအုပျတိုကျ ၁၂ ခုက ပယျခဘြူးပါတယျ တဲ့။
ဒီ Bollywood Star ကွီး အမီတာဘခမျြးကို မိတျဆကျပေးဖို့ လိုမယျမထငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အိန်ဒိယ ရဒေီယိုက သူ့အသံကို ငွငျးဖူးပွီး ပထမဆုံး ရုပျရှငျ ၁၂ ကားလုံး ရှုံးဖူးတယျဆိုတာ သိသူနညျးပါတယျ။
ဘဝပေးကံ ဆိုးတယျ ထငျသူမြားအတှကျ Oprah Winfrey ဟာ အသကျ ၉ နှဈမှာ မုဒိမျးအကငျြ့ခံရပွီး ၁၅ နှဈနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျခဲ့ရပါတယျ။ သူက ကမ်ဘာ့ဩဇာအရှိဆုံးအမြိုးသမီးထဲ ပါဝငျလာပွီး ကမ်ဘာ့ ပထမဆုံး လူမညျး ဘီလြံနာ ဖွဈခဲ့တာကို မမေ့ထားပါနဲ့။
Previous: သင့်ဝန်ထမ်းများကို ပျော်ရွှင်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Next: ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ ရှောင်ကြဉ်ရမည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အမှားများ